INJ. FAYSAL: "Khilaafka Madaxda Somalia Waa mid ka dhashay Maamullada"
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee UCID, Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay khilaafka madaxda Soomaaliya u dhexeeya ayaa sheegay inuu yahay mid ka dhashay maamul-goboleedyada badan ee Somalia laga dhisayo.
FEYSAL WARAABE: “Beesha Caalamku waxba kuma qasbi karaan Somaliland”
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Somaliland UCID, Inj. Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay dagaalkii ciidamada Somaliland ay shalay ku qabsadeen deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool ayaa sheegay in beesha calaamku aysan waxba ku qasbi karin Somaliland.
Daawo sawiradda:Ra'iisul Wasaaraha xilka ka dagaya Saacid oo ka qeybgalay Aaska Marxuum Xil. Maxamed Warsame
Sagal Radio Services • News Report • December 7, 2013
Ra’iisul Wasaaraha xilka ka dagaya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa saaka ka qeybgalay aaska Marxuum Xildhibaan Maxamed Warsame Maxamed “Feysal” oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho, wuxuuna Ra’iisul Wasaare Saacid halkaasi ka jeediyay erayo tacsi ah.